Nhau Archive - GUTA FOMU DESIGN → Diki Yekuvakwa Kwemaguta ☆ Metalco ☆ Bellitalia
Nhandare yemitambo yemazuva ano inobvumira kunakidzwa kusingabvumirwe uye kwakachengeteka mumhepo yakashama kwete chete kune vana veese mazera, asiwo vechidiki. Kutamba pazvipenga uye zvese zvishandiso zvakaiswa panhandare yekutamba, kunyanya kana ichiitwa mune shamwari, chinhu chikuru ...
Parizvino, fenicha yemumigwagwa inosanganisirawo maruva emuti. Izvi zvinoshanda uye zvinonakidza zvinhu zvinogona kugadzirwa zvakasiyana siyana. Miti iripo munzvimbo yemadhorobha inovimbisa yehutano hwevagari, kuzorora uye kunzwa kwakanakisa kwevanhu vanogara munzvimbo yakasvibira. ...
Misting masisitimu anoshandiswa mune yakaoma fog disinawon maitiro anogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana. Parizvino, apo isu tiri kufunga nezve nzira inobudirira yekuuraya hutachiona makamuri, mhinduro dzakadai dzinowanzo kuverengerwa nevaya vane hutano ...
Disinfection zviteshi / nemaoko ehutsanana zviteshi zviri zvitsva muchipo chedu sechinhu cheshoma dhizaini. Iyo mhinduro inogonesa ruoko kurasa utachiona uye kurasa marara. Dhawunorodha macatalog uye pricelist >> Kushambidza uye kuuraya utachiona maoko zviitiko zvakakosha zvinobvumidza ...
Diki dhizaini inogadzirwa nezvidiki zvekuvakisa zvinhu zvakasanganiswa munzvimbo yedhorobha kana iri pane imwe chivakwa, ichipa hunhu hwakananga kunzvimbo yakapihwa. Mbiru dzekongiri, mabhenji emazuva ano, masheti, mabhodhi, maruva emaruva, marara emarara, mabhasiketi akamira, ...
Ichokwadi kuti basa remugadziri ibasa rekuzvimiririra iro rinogona kuunza kugutsikana kwakawanda uye mabhenefiti epfuma, asi nzira yekutanga kushanda segadziri haisi nyore kana ipfupi. Pamusoro peiyo nhanho iri pachena yekudzidza uye yekunyatso kudzidza, iyo inoshuva dhizaini inofanira zvakare ...
Kutambisa marara semabhini sechikamu chekudzokorodza kwemamanisita kubatsira kuchengetedza nzvimbo dzeveruzhinji dzakachena, kubvisa zvinetso zvipukanana uye nekupa zvakanakira zvakatipindirana nekubvisa marara kubva pamarara. Mataundi anogona zvakare kudzikisa mutengo wekupeta uye ...
Nzvimbo yakanaka yekuchengetedza bhazi chinhu chakakosha chero chakabudirira chemadhorobha mass transit system. Chii chinoita kuti ive yakanaka ndiyo midziyo inoita kuti ive yakaderera kuchengetedza uye kuparadza inodzivirira. Uyezve, inopa kuoneka uye nyore kupinda mubhazi, ...
Bhodhi remashoko rakaperekedza vanhu kubvira mambakwedza enguva
Zvinogona kutaurwa kuti kuberekwa kwezviratidzo uye mahwendefa ndezvechinyakare sekuvapo kwemunhu papasi. Mhando dzakasiyana-siyana dzezviratidzo zvemashoko dzakashandiswa kubva pakutanga kwenyika, imwe neimwe yadzo yakashanda zvinobudirira nekuda kwezveruzivo. Nekuwanikwa kwendarira nesimbi, murume akatanga kushandisa izvo zvigadzirwa zve ...
Bhasikoro rack - mhando uye zvakanakira
Mabhasikoro anofanirwa kuchengetwa mune chaiyo mamiriro, saka rakakodzera rack rinobatsira. Icho chigadzirwa chakakura kwazvo zvekuti munhu wese anozowana rakanakira bhasikoro rack rake, iro rinogona kunge rakasiyana zvachose neiro rinoonekwa pamatanho ese munzvimbo yeruzhinji. Ona chigadzirwa chigadzirwa.
KANA Dhizaini Mubayiro 2020 weMetalco mhando!
Isu tinodada kuzivisa kuti Smart BHLS Transoceânica Corridor naGuto Indio da Costa vakagamuchira chinzvimbo chepamusoro IF Design Mubairo 2020 muchikamu cheKugadzira Excelence kwenzvimbo yekudyidzana yebhazi, inova chikamu cheiyo SMART CITY chirongwa. Ona iyo online chigadzirwa katalog >> kana ...
Anogadzira anoshanda pamwe nekuronga uye dhizaini yechivakwa kana dhizaini. Vagadziri vanokwanisa kuongorora pfungwa kana mazano evatengi vavo uye kugadzira akasiyana ezvivakwa zvekuvaka zvakavakirwa pavari. Basa remugadziri rinogona kusiyana: mamwe anokoshesa dhizaini yezvivakwa ...
Urban kuronga - chii chaizvo?
Nhasi, kuronga kwemadhorobha ndiyo imwe yesayenzi inonyanya kukosha kana iwe ukafunga kuti yakakura sei chikamu chevagari vepasi pano vanogara mumaguta akapoteredzwa. Muna 1800, vanopfuura 2 muzana yevagari vepasi rese vaigara mumaguta. Pakazosvika 1950, nhamba iyoyo yakanga yakwira kusvika makumi matatu muzana. Saka zvino ...
Mutemo Wokuvaka chiitiko chinotarisa uye kutsanangura zviitiko mumunda wezvekugadzira, kuvaka, kuputsa nekutarisa zvivakwa. Chikamu chega chega chekuvaka chivakwa, kubva pakugadzirwa kwaro kusvika pakupera, zvinoda kutevedza mutemo wekuvaka. Mutemo wekuvaka uye zvidiki zvekuvakwa Nemutemo ...
Iyo kurongeka kwebindu kunofanira kuitwa nekutarisira kukuru. Nekudaro, kunyangwe kana mushandisi asina bindu rakakura paari, asi bindu diki chete, kana kunyange mhanza kana terari, rinogonawo kugadzira chikamu chegirini nzvimbo. Hwaro hwayo hunobva hwave mapoto ebindu, ayo ...
Iyo fenzi ichave yakanaka uye yakasimba seyafenzi machira anoitsigira. Zvisinei nezverudzii rwezvinhu zvavachagadzirwa, zvakakosha kuziva zvakanakira, zvakaipira uye kushandiswa kwemafence mapango akagadzirwa nematanda, simbi, kongiri fenzi mbiru uye kwakakurudzira ...
Mazuva ano marara emarara mabhini sechinhu chinogadzirisa mataundi
Marara emarara, anowanikwa munzira, munzira, munzvimbo dzekutandarira, munzvimbo dzekutamba, kumabhokisi ejecha, mumapindu uye munzvimbo dzemaguta, dzimwe nguva anonzi marara emigwagwa, mabhini emigwagwa, mabhini emuguta kana mabhini emarara eguta. Ona iyo online chigadzirwa katalog ...
Paki, guta uye mabhenji ebhenji
Mabhenji epaki chinhu chakakosha mumidziyo yemumugwagwa. Kubva pakuona kwekushandiswa kwemabasa, anoshandiswa kugara, asi achifunga nezvekuronga nzvimbo, iwo midziyo yemuguta. Mapaki, masikwere, magadheni, migwagwa uye zviteshi zvemaguta zvakagadzirwa nemabhenji. Ona katarogu ...
Diki rekuvakwa kwedhorobha
Diki rekuvakisa iboka rezvivakwa zvidiki izvo zvinokanganisa zvakanyanya kutaridzika kwenzvimbo nevashandisi vayo. Iko kuburikidza nekushandiswa kwezvinhu zvakasarudzika zvakasarudzika zvidiki zvekuvakwa izvo nzvimbo yakavakirwa inotora pane hunhu, kutaura uye, pamusoro pezvose, inova ...